ထို့နောက်မော်ကွန်းတိုက် - Tele RELAY တစ်ခု
Panique de Meghan et Harry: les craintes grandissent & # 039; très difficiles & # 039;…
var brightcoveBrandsafety='4 Sport and specialist news – passed for ad targeting' La bombe financière choc arrive moins d'une semaine dans les nouveaux rôles de Meghan Markle et Harry en dehors de la famille royale. Omid…
အိန္ဒိယ - Covid-19: 16 သည်တစ်ရက်တွင်သေဆုံးသည်။ အိန္ဒိယသို့ရောက်ရှိစဉ်တမီလ်နာဒူးမှအမှုပေါင်း ၁၀၂ ခုကိုမှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။
အိန္ဒိယနိုင်ငံသည် Covid-15 မှသောကြာနေ့တွင် ၁၅ ယောက်သေဆုံးပြီး၊ ကူးစက်ရောဂါစတင်ဖြစ်ပွားချိန် မှစ၍ တစ်ရက်တာအမြင့်ဆုံးသေဆုံးမှုဖြစ်သည်။ သေဆုံးသူ ၈၅ ဦး အထိရှိခဲ့သည်။ အမှုပေါင်း…
"Cheeky စာအုပ်မြှင့်တင်ရေး!" တွစ်တာအသုံးပြုသူသည်မင်းသားချားလ်စ်အားလှောင်ပြောင်သည်။
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးသတင်းသတင်း - ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အောင်မြင်ခြင်း' ချားလ်စ် (၇၁ နှစ်) သည်မကြာသေးမီက coronavirus ရောဂါပျောက်ကင်းအောင်ကုသပေးခဲ့သည့်သူ၏စကော့တလန်အခြေစိုက် Birkhall မှဆေးရုံကိုဖွင့်လှစ်ရန်အဝေးကနေထွက်လာသည်။
ဗိုင်းရပ်စ်ပျံ့နှံ့နေစဉ်အမေရိကသည်အိမ်မပြန်ခဲ့သည့်နေရာ - အသစ်…
ဖော်ပြခဲ့သောzonesရိယာများသည်မတ်လ ၂၇ ရက်မတိုင်မှီနေထိုင်ရာအမိန့်များကိုသိရှိခဲ့သည်...
သမ္မတ Trump ကကြာသပတေးနေ့တွင်ဆော်ဒီအာရေဗျနှင့်ရုရှားတို့လျှော့ချမည်ဟုမျှော်လင့်ကြောင်းပြောကြားပြီးနောက်စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီများမှာပြန်လည်မြင့်တက်လာခဲ့သည်။
ကမ္ဘာတ ၀ ှမ်းရှိ Coronavirus ရောဂါဖြစ်ပွားမှုဟာတစ်သန်းကျော်သာရှိသေးပြီး၊
ကြာသပတေးနေ့မွန်းလွဲပိုင်းတွင်ကမ္ဘာပေါ်တွင် coronavirus ကူးစက်ခံရသူအရေအတွက်သည်အံ့ stage စရာကောင်းလောက်အောင်အဆင့်သို့ရောက်နေပြီဖြစ်သည်။ အတည်ပြုထားသောရောဂါဖြစ်ပွားမှုအရေအတွက်သည်တစ်သန်းကျော်ရှိသည်။ စာရင်းဇယားများအရသိရသည်။
ဘုရင်မသည် coronavirus ပိတ်ဆို့ခြင်းခံနေစဉ်သူမအနေဖြင့်သူမတစ် ဦး ပြန်လည်ရောက်ရှိလာချိန်တွင်သူမ၏အလုပ်ကိုဆက်လက်လုပ်ဆောင်သည်။
var brightcoveBrandsafety = '4 ကြော်ငြာနှင့်ပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အားကစားနှင့်အထူးကုဆိုင်ရာသတင်းများ' ဘုရင်မကြီးအဲလစ်ဇဘက် ၂ သည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော coronavirus ကူးစက်မှုကြားမှ Windsor Castle တွင်ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
မင်းသားချားလ်စ်က ၀ န်ခံသည်နှင့်အမျှ coronavirus တွင်ကြေကွဲဖွယ်သတင်းကိုထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။
var brightcoveBrandsafety = '4 အားကစားနှင့်အထူးသတင်းသတင်း - ကြော်ငြာကိုပစ်မှတ်ထားခြင်းအတွက်အောင်မြင်ခဲ့သည်' မင်းသားချားလ်စ်သည်ရောဂါလက္ခဏာပြပြီးခုနစ်ရက်အကြာတွင်တစ်ကိုယ်တည်းအထီးကျန်ခြင်းအဖြစ်မှထွက်ခွာခဲ့ကြောင်းယခုအပတ်တွင်ကြေငြာခဲ့သည်
နယူးယော့ခ်အိမ်ငှားများ၏ ၄၀% သည်ယခုလငှားရမ်းခမပေးနိုင်ပါ။ သို့ဖြစ်လျှင်အဘယ်သို့နည်း။ - …
အားလုံး၏စစ်မှန်သောစီးပွားရေးမျှတမှုဖြစ်သော်လည်းနယူးယောက်မြို့သည်onပြီလတွင်ငှားရမ်းခများကုန်သွားသည့်အချိန်တွင်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Coronavirus ပြန့်ပွားမှုကိုတားဆီးရန်နယူးယောက်မြို့ကိုပိတ်ပစ်လိုက်ခြင်းသည်ပိုမိုရှင်းလင်းလာဖွယ်ရှိသည်။
အိန္ဒိယ - အစိုးရများကရာနှင့်ချီသောပြန့်ပွားမှုပျံ့နှံ့မှုကိုထိန်းချုပ်ရန်အဆောတလျင်
123 ... 30 လာမယ့်